ရွှံ့နွံကုသမှု ရွှံ့နွံကုသမှု မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
CHI SHUN MACHINERY PLANT CO., LTD. တစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပသို့ပို့ကုန်ဖြစ် ရွှံ့နွံကုသမှု, ရွှံ့နွံစွန့်ပစ်ခြင်းအတွက်ခါးပတ် Filter ကိုနှိပ်ပါ, ရွှံ့နွံရေဆိုးစက် အတွက်စက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူ Taiwan. ကျနော်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ပို့ကုန်တသမတ်တည်းမြင့်မားလူတန်းစားထုတ်ကုန်များနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တရားမျှတစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ကိုမှစုစုပေါင်းဝန်ထမ်းပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်တင်းကြပ်ထိန်းသိမ်းလိုက်နာမှုအားဖြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သို့တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ကျနော်တို့ကိုလယ်၌အများအပြားမူပိုင်ခွင့်ရပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်ဖြူနဲ့ Hard အလုပ်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးနှင့်ကိုက်ညီဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစတိုင်များအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
အကောင်းဆုံး ရွှံ့နွံကုသမှု ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် ရွှံ့နွံကုသမှု ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ ရွှံ့နွံကုသမှု ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒသည်အဆင့်မြင့်ပေးခြင်းဖြင့်ဖောက်သည်များ၏ကျေနပ်မှုကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်ရွှံ့နွံကုသမှု သူတို့မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းသို့မဟုတ်ကျော်လွန်သောပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းသည်အသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းများမှတရားဝင်စီမံကိန်းကြီးများအထိဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီစေရန်ထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်အားဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးကဘာလဲရွှံ့နွံကုသမှု ပစ္စည်းကိရိယာ?
ခါးပတ်စစ်ထုတ်စက်ယိုစိမ့်စက်သည်အစိုင်အခဲ - အရည်ခွဲထုတ်ခြင်းတွင်အသုံးပြုသောကိရိယာဖြစ်သည် ရွှံ့နွံများကိုရေဓာတ်ခန်းခြောက်သည့်စက်ထဲသို့ထည့်ပြီး roller များနှင့် filter belts များဖြင့်ဖိအားဖြင့်ရေကိုထုတ်လွှတ်ပြီးမြေမှုန့်ကိုကိတ်ပုံသဏ္intoာန်အဖြစ်ကန့်လန့်ကာပမာဏကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ အပါအဝင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန် ရွှံ့နွံစွန့်ပစ်ခြင်းအတွက်ခါးပတ် Filter ကိုနှိပ်ပါ , ရွှံ့နွံရေဆိုးစက် , ရွှံ့နွံစွန့်ပစ်ခါးပတ်စာနယ်ဇင်း , ရွှံ့နွံစွန့်ပစ် Filter ကိုနှိပ်ပါ နှင့် Gravity Sludge Thickener , ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ရေဆိုးများ၏ကုသမှုများအတွက်အသုံးပြုနှင့်စက်မှုသို့မဟုတ်ပြည်တွင်းရေဆိုးများအတွက်သင့်လျော်သောနိုင်,
Plate and Frame Filter Press သည်အခြေခံအကျဆုံးဒီဇိုင်းဖြစ်သည်ရွှံ့နွံကုသမှု ၎င်းကို "အမြှေးပါးပြား filter filter" ဟုလည်းခေါ်သည်။ ပန်းကန်ဖိအား dewatering စက်သည်ရွှံ့နွံထဲမှာအစိုဓာတ်ပါဝင်မှုကိုလျှော့ချရန်ရွှံ့နွံထဲမှာအစိုင်အခဲများနှင့်အရည်ကိုခွဲခြားရန်ရွှံ့နွံဖိအားကိုအသုံးပြုသည်နှင့်ဖိအားညှစ်။ plate press dehydrator ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ရန် CHI SHUN သည်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအသုံးပြုပြီးလည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းလုံခြုံမှုကိုသေချာစေနိုင်သည်။
Rake မျက်နှာပြင်သည်ရေဆိုးအတွက်ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်ရွှံ့နွံကုသမှု ။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအစိုင်အခဲများ၊ စက္ကူများ၊ ပလတ်စတစ်များ၊ သတ္တုများနှင့်အခြားအရာဝတ္ထုများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အတွက် ရေဆိုးကုသမှုတွင်မြင်ကွင်းများ
ရွှံ့နွံစွန့်ပစ်ခြင်းအတွက်ပိုလီမာစနစ် စွန့်ပစ်ရေသန့်စင်ရေးအတွက်အခြေခံပဏာမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စွန့်ပစ်ရေသန့်စင်ခြင်းမှရေချိုအချိန်ကိုလျှော့ချရုံသာမကရေဆိုးသန့်စင်ရေးစက်ကိရိယာများမှရေဖျန်းသောရလဒ်ကိုလည်းတိုးစေသည်။